Boqortooyada Gaana: Wagadu - Afrikhepri Fondation
Khamiista, abriil 15, 2021
Boqortooyadii Ghana: Wagadu
Dn qarniyadii ugu horreeyay ee xilligeenna, Wagadu, oo ah boqortooyo yar oo ku taal inta u dhexeysa Senegal iyo Niger, oo laga helo ilaha dahabka, ayna xukumaan qabiilka Cissé Tounkara, ayaa ugu dambayntii xukuntay dhammaan Soninkés, dad beeralay ah. .
Boqorka ayaa awoodiisa ku saleeyay cibaadada Wagadu-Bida, ilaaha abeesada. Wuxuu sitay cinwaanka "Kaya-Magan" ama "Boqorka Dahabka".
Dhibaatooyinka dhaxalka lama garanayn sababtoo ah dhaqan ayaa si toos ah loogu meeleeyay carshiga wiilka ugu wayn ee walaashii weyn ee boqorka.
Taliyihii Wagadu wuxuu soo dhoweeyey baayac muslimiintii ganacsatada ahayd ee yimid qarnigii XNUMXaad gobolkan ay ugu yeedheen Gaana (laga bilaabo magaca cinwaanka ah ee boqorradu u dhaleen oo macnaheedu yahay "dagaal ooge").
Wuxuu u oggolaaday inay degaan meel u dhow caasimaddiisa, Koumbi Saleh, si ay ugu beddelaan wax soo saarkooda dahab, laakiin ay ku hayaan ilaalin dhow, maxaa yeelay wuxuu xafiday sirta asalka maaddadan qaaliga ah.
Wagadu waxay ku egtahay awoodda Dooxada Senegal iyo inta badan gudaha Niger Delta.
Waxay ku jirtay boqortooyadan aadka u baahsan ee ay ka soo muuqdeen kooxihii ugu horreeyay ee ganacsatada iyo farsamayaqaannada.
Caasimaddiisa, boqorku wuxuu ka taliyaa boqortooyo loo qaybiyay gobollo iyo boqortooyooyin isagoo wata ciidan dhan 200 oo nin. Guddoomiyeyaasha, boqorrada, wasiirradu waxay ka caawiyaan inuu xukumo dadkiisa oo ka kooban saddex qaybood oo bulsheed: goblo (ganacsato, beeraley, aristocrats…), rag casri ah (farshaxanno, halyeeyo…) iyo addoomo (maxaabiis…)
Waxay ku saleysan tahay dhaqaale aad u horumarsan: beeraha waxay ku barwaaqoobeen Koonfurta, xannaanada xoolaha ee Waqooyiga; ganacsiga, gaar ahaan trans-Saharan, wuu kobcayaa (dahab, harag, badarka, addoommada, iwm.), macdanta dahabka iyo birta ah waxay muujinayaan inaan la koobi karin, gaadiidkuna wuu kobcayaa.
Feejignaanta boqortooyadan animist waxay soo jiidataa hunguriga deriskeeda muslimiinta ah. Laga soo bilaabo 1042, Berbers waxay islaameen, Almoravids, waxay bilaabeen qabsashadii Wagadu. Magaalada Aoudagost waxaa lala wareegay 1057, kadib Koumbi Saleh 1076 laakiin waxaa lala wareegay 1087.
Si kastaba ha noqotee, Wagadu aad ayuu u daciifsan yahay, ka dibna wuxuu bilaabmaa hoos u dhac gaabis ah oo soo noqnoqonaya.
Dadweynihii boqortooyadu waxay ahaayeen kuwo cadaw ku ah Islaamka, oo xoog lagu soo rogay, waxay u haajireen Koonfurta ama Bariga. Umaddu waa sii xaalufineysaa, sidaas darteedna ciidammadoodu awood yar. Sidaa darteed, boqortooyooyinka sida kuwa Maali ama Diara waxay xorriyadda u leeyihiin inay ka go'do boqortooyadii oo noqon doonta boqortooyo yar.
Isla mar ahaantaana, waxa ka dhigay barwaaqadiisa (ganacsiga, taranka, beeraha, macdanta) waa mid aan nidaamsanayn. Qaar ka mid ah dawladaha hoose waxay ka faa'iideystaan ​​tan si ay u horumariyaan. Midkood, Sosso-kii weynaa ee Soumaoro Kante, wuxuu xitaa qabsaday Wagadu barqadii qarnigii 13-aad.